MyIdol | IPhone nhau
MyIdol, iyo Chinese app iri kutsvaira nyika
Kana China ichizivikanwa nechimwe chinhu, ndeyekunyepera kana kuteedzera zvigadzirwa - kunyanya kubva kuApple-, asi mune ino nyika yeChinese ndiyo yakakwanisa kuisa app zvachose muChinese pamusoro pechikumbiro ... kunze kweChina. Iwo masosi enzvimbo zhinji anoverenga MyIdol semushanyi akasarudzika kunyangwe asina kana shanduro yeChirungu. Sei?
1 Mubvunzo wehunhu
2 Kushandisa sei
MyIdol ndeye-matatu-mativi avatar jenareta iyo inoshandisa iyo kamera ye iPhone kutarisa scan kumeso kwedu uye kuburitsa chaiyo dhora. Haisi yekutanga app kuita izvi, asi chokwadi ndechekuti MyIdol inowana Chikamu chemashoko uye zvinoshamisa kuita kwakanaka, uye ndezve icho chikonzero icho chakaburitsa iyo app muzvikamu zvine hutsinye.
Sezvatakambotaura, iko kunyorera kuri muChinese, saka pakupedzisira kushandiswa kwayo kunenge kuri kupofomara, kunyangwe nekufamba kwenguva tichadzidza kuti sarudzo yega yega iripi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti akawanda mativi eapp anoratidzirwa ne mifananidzo kana mifananidzo, izvo zvinobatsira zvakanyanya kugona kugadzirisa pane avatar kana kutenderera iko kunyorera.
Dai iyo app yaive muchiSpanish kana Chirungu kunyangwe mwana aigona kuishandisa pasina matambudziko, asi kuve muChinese unofanirwa kuziva zvishoma kwatinofamba. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita mu MyIdol Iwo mufananidzo wechiso chedu, uchikwanisa kusarudza pakati pekamera yekumashure - mhando yepamusoro asi yakanyanya kunetsa kutora - kana yekumberi. Mushure mezvo, iyo app ichaongorora kumeso kwedu uye igadzire iyo avatar (ungafanira kugadzirisa mamwe mapoinzi), ayo atinogona kugadzirisa muzvinhu zvakasiyana senge bvudzi, saizi yechiso kana matauriro eganda.
Iine avatar yakagadzirwa uye yakapfeka pakati peakasiyana e mbatya uye zvishongedzo, rinotevera kudzvanya pane bhatani repamusoro kurudyi kuenda kuchikamu kwatinosarudza pakati pezviito zvakasiyana zvine chekuita nemamiriro eedu avatar, iri danho pamberi pebasa renyeredzi reapp.
Izvo zvinhu zvakanaka uye chii chaita kuti application ive nemukurumbira iyo avatar inotamba. Nekudzvanya pane yevhidhiyo icon tichava nemazhinji nziyo nemadhanzi ekusarudza kubva mune yakatarwa neyakajeka kupururudza iyo zvakare ine mufananidzo wenziyo yega yega, saka hazvizonetse kusarudza iyo yatiri kutsvaga. Zvakare, mamwe mazita ari (chishamiso) mumutauro wavo wepakutanga.
Iko kushandiswa kuri dzakasununguka zvachose uye zvinoshamisa kuti zvinotora zvishoma pane zvese zvirimo, kuti usarase chero chinhu nekutarisa kwairi uye kugadzira yako avatar. Ehe, bhatiri rinoridya, unoyambirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » MyIdol, iyo Chinese app iri kutsvaira nyika
Marlon camargo akadaro
Zvakanaka kuti zvinotaridzika seChinese, asi ini handinzwisise zvakanyanya izvo izvo App zvinondiudza, ini ndoda kugadzira chidhori changu asi handizive zvazvinotaura ...
Pindura Marlon Camargo
Pablo Esquinazi akadaro
Icho chiri chiChinese app, chii chaunoda XD?
Pindura Pablo Esquinazi
David Perales akadaro
Zvakanaka, zviri nyore kwazvo ...
Pindura David Perales
JoSé DaVid Royce Ortiz akadaro
Pindura JoSé DaVid Royce Ortiz
Hernán Ventura López akadaro
Pindura Hernán Ventura López
Andres Ferreira akadaro
Pfungwa yacho yakanaka asi iyo app dzimwe nguva inononoka kana kuvhara. Iphone 6
Pindura Andrés Ferreira
Ndinochida asi zvinorwadza kuti chiri muchiChinese, hapana chandinonzwisisa, ndinoda kuita zvinhu uye ndinopedzisira ndaita zvekukwirana.
Iyo app iri nyore kushandisa, iri nyore kwazvo kunyangwe iri muchiChinese
Virginia Salvatori akadaro
Isa mumwe mutauro ndapota !!! Hapana chinonzwisiswa muChinoo
Pindura Virginia Virginia Salvatori
Miguel Daza akadaro
Ndakaitora pasi uye kunyangwe ndisina kunzwisisa chero chinhu pane zvayakataura, ndakwanisa kuita zvese
Pindura Miguel Daza
Cesar Acevedo akadaro
Izvo zvakanaka kwazvo, chakanakisa nezvazvo ndechekuti iwe unogona kusevha mavhidhiyo nemifananidzo zvakananga paiyo iPhone, imwe sarudzo iwe yaunogona kuchinja mamiriro, haudi kunyatso kuziva Chinese kuti uishandise.
Pindura kuna Cesar Acevedo
Periscope inogadziridzwa nekuwedzera emission nhoroondo
Maitiro ekuwedzera shamwari kuApple Watch